Fahavoazan’ny havokavoka :: Vehivavy nitondra ôksizena nandritra ny enin-taona, mandrapahafatiny • AoRaha
Fahavoazan’ny havokavoka Vehivavy nitondra ôksizena nandritra ny enin-taona, mandrapahafatiny
Tsy tafavoaka velona tamin’ny olan’ny havokavoka nahazo azy ity tovovavy iray, na dia novonjena tamin’ny ôksizena nandritra ny enin-taona aza. Niezaka nanampy azy tamin’ny fampitaovana ny fanampiana avy amin’ireo malala- tanana, indrindra nahafahana nahazo ny fitehirizana ôksizena tsy nisaraka taminy hatramin’ny nialany aina. Herintaona mahery kely ihany no nampiasaina an’ilay fitaovana dia nodimandry ity tovovavy.
Feno enina amby telopolo taona tamin’ny taona 2013 Rahobinavalona Hanitrasina Bodonandrianina na i Hasina no voatery nampidirina hôpitaly noho ny olan’ny taovam-pisefoana nahazo azy, araka ny filazan’ny mpitsabo. Natsahatry ny mpampiasa azy tamin’ny asany avy hatrany izy noho ny fahalavan’ny fotoana nitsaboany tena teny amin’ny hôpitaly.
« Tery ny tratrany nefa ngezabe ny fony ka ny ampahenin’ny havokavony ihany no afaka miasa. Niteraka ny fahasemporana taminy izany toe-pahasalamany izany », hoy i Hanta Arinoro, reniny, mitantara ny fijalian’ny zanany tao anatin’ny taona maro. Nodimandry tamin’ny alakamisy 29 aogositra 2019 lasa teo ity vehivavy, roa amby efapolo taona ity, rehefa nolazoin’ny aretina nandritra ny enin-taona.
Sempotra tsy afa-mifoka rivotra araka ny tokony ho izy i Hasina. Tsy nisaraka tamin’ireny tavoahangy lehibe misy ôksizena ireny ity vehivavy, na aiza na aiza alehany. Ankoatra ny ôksizena nipetaka amin’ny orony dia mbola asiana seraoma nanampy ny fitsaboana. Fijaliana ho azy ny fahatapahan’ny herinaratra matetika tany Antsirabe, izay nisy ny toeram-ponenany.
Nanomboka tamin’ny taona 2013no tsy afaka nivoaka ny tranony sy nivezivezy intsony i Hasina.
Ar 150 000 isan-kerinandro
Mitoetra foana ny olan’ny fahalafosan’ny saram-pitsaboana eto Madagasikara, raha miresaka manokana ny tranga nihatra tamin’ity vehivavy iray ity. Volabe no lany, na tamin’ny fepetra manokana nahafahana nitazona ny ain’i Hasina noho ny tsy fahatomombanana tamin’ny taovam-pisefoana, na tamin’ireo fanafody nitsaboana azy. Vao aretina tsy mahazatra no miseho dia matetika no midangana ny saran’ny fitsaboana.
Novidiana 150.000 ariary mantsy ny tavoahangin’ny ôksizena iray nefa lany ao anatin’ny herinandro, ankoatra ny vidim-panafody sy ny hofan’ny efitranon’ny hôpitaly tsy miankina, izay niasan’ny reniny. Kely ny fidiram-bolan’izy mianaka ka tsy naharaka intsony ny vola nivoaka. Nangataka ny hivoaka ny hôpitaly ry zareo mba hotohizana any an-trano ny fitsaboana.
« Fifampitokisana no nandehanana nody satria tsy mbola voaloa ny vidin’ny ôksizena tao. Efa taty aoriana vao naloa tsikelikely », hoy hatrany i Hanta Arinoro, mitantara ny ngidin’ny fiainana niainan’izy mianaka izay niafara tamin’ny fisarahana an-tany ihany anefa. Toa zary ala-nenina sisa ny fandanian-karena satria na ny fitsaboana aza tsy nahomby akory.
Roa vavy ry Hasina no mpiray tampo. Izy no vavimatoa. Rehefa nivoaka ny hôpitaly, dia nipetra-drery tao an-trano i Hasina, matetika. Mahandro ny sakafon’i Hasina ilay zandriny, telo mianaka, vao mamonjy ny tokantrano raha sendra miasa alina ny reniny, fony tsy mbola nandeha nisotro ronono. Tonga dia miantsena rehefa avy miasa alina na antoandro i Hanta Arinoro ho fisorohana tamin’ny fivezivezena.
« Raha miasa antoandro aho dia masahako maraina ny sakafo antoandrony. Rehefa miasa alina indray dia miara-misakafo izahay mianaka vao mandeha miasa aho », araka ny fitantaran’ity reny nilaozan-janaka. Mifandimbindimby ny andro hiasana sy ny tsy hiasana tao amin’ilay hôpitaly tsy miankina, ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra, toeram-piasan’i Hanta Arinoro.
Na tao anatin’ny aretina nitambesatra aza i Hasina dia nifikitra hatrany tamin’Andriamanitra. Tsy hita soritra teny amin’ny tarehiny ny fahakiviana. « Mitsiky foana izy na fantany fa tsy ho afa-bela amin’ny fampiasana ireo fitaovana nanodidina azy aza izy. Ianao mamangy azy indray no ampahereziny. Tena natanja-tsaina izy raha ny havesatry ny aretina nanjo azy », hoy kosa i Cathy Lalaina, namany tsy nahafoy azy na tany am-pianarana ka hatrany am-piangonana tao anatin’ny antoko mpihira.
Olona sariaka Rahobinavalona Hanitrasina Bodonandrianina, fony fahavelony. Mpandamin-dresaka raha sendra nisy ny olana tao anatin’ny antoko mpihira. « Maka tsy taitra izay izy rehefa mamaly anao raha misy ny fahatezerana na fahasorenana manjo anao. Mahita hevitra atoro anao foana izy », araka ny fahatsiarovana tsy maty vonoina ao amin’i Morel Vololona, isan’ny naman’i Hasina, saingy monina atsy La Réunion, nandritra ny tafatafa natao taminy tao anatin’ny tambanjotran-t serasera.
« Gina tanteraka aho, ny tolakandron’ny alakamisy. Sady nitomany no niteny tamin’ny vadiko fa marary mafy i Hasina. Niteny tamin’i Cathy izy fa kely ny ainy. Izaho amin’io tsy mbola nahalala fa efa maty anie i Hasina », hoy hatrany i Vololona, mitantara ny fahoriany satria tsy hifanatri-tava amin’ilay namany fony taty Madagasikara intsony.
Nalevina teny Ambohitanety Alasora, tamin’ny sabotsy 31 aogositra 2019, ny nofo mangatsiakan-dRahobinavalona Hanitrasina Bodonandrianina na i Hasina.
Baolina kitra – Tompondakan’i Afrika :: Voatazon’ny Fosa Juniors ady sahala ny TP Mazembe
Fisarihana teratany vahiny :: Hohamoraina ny fampiasam-bola amin’ny fizahantany eto Madagasikara